राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ९ गते, यसपटक क-कसको कार्यकाल सकिँदैछ ? | suryakhabar.com
Home राजनीति राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ९ गते, यसपटक क-कसको कार्यकाल सकिँदैछ ?
on: २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:२२ In: राजनीति, समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । आज(बिहिबार) राजधानीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कुटाले माघ ९ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका नेकपाका ८, कांग्रेसका ७, राजपाका २, समाजवादीका एक र सरकारबाट मनोनित एकजना गरी १९ सांसदको दुईवर्षे कार्यकाल फागुन २१ मा सकिँदैछ । संविधानअनुसार सदस्य पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । सोहीअनुसार सरकारले माघ ९ गते चुनाव घोषणा गरेको हो ।
यो निर्वाचनमा पहिले हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछन् । यो निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशमै हुनेछन् भने र तत् प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य सात जना निर्वाचित हुनेछन् ।